फेरि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्री ओली, कसको भागमा कुन मन्त्रालय ! - Nepal No 1 News - Bishwokhabr.com
फेरि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्री ओली, कसको भागमा कुन मन्त्रालय !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिपरिषद् बैठक विस्तार गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पुनर्गठन गरेको मन्त्रिपरिषदमा सात मन्त्रालय खाली थिए । खाली भएका ती मन्त्रालयमा उनले नयाँ नेताहरुलाई मन्त्री बनाउने भएका हुन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात मन्त्रीको नाम पठाइसकेका छन् । नियुक्त नयाँ मन्त्रीहरुले आज साँझ चार बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा सपथ लिँदैछन् ।
त्यस्तै, आजै नैनकला थापालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना तथा सन्चारमन्त्री बनाउँदै छन् । नैनकला थापा यसअघि महिला आयोगकी अध्यक्षसमेत भएकी थिइन् । उनी पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाकी श्रीमती हुन् ।
त्यस्तै, माओवादीबाट एमालेमा आएको समूहबाट ज्वाला शाहले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएकी छिन् ।